Vovonam-boninkazo vita amin'ny Finasteride (98319-26-7) - Phcoker
SKU: 98319-26-7 Sokajy: Sex Hormone
Vovon-tsakafo vita amin'ny Finasteride (98319-26-7) video
Ny vovon-tsakafo Finasteride dia antandrônina natao tamin'ny vava izay manakana ny fanavakavahana II II 5-alpha.It dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny volo volo (lahy), ny hyperplasia malemy prostatika (BPH) amin'ny dosia ambany, ary ny homamiadan'ny prostate amin'ny dose ambony . Ampiharina ihany koa ny fampiasana miaraka amin'ny doxazos amin'ny fitsaboana mba hampihenana ny loza mety hitranga amin'ny fivoaran'ny aretina BPH. Ankoatra izany, nosoratana ho an'ny firenena maro izy io ho an'ny alopecia androgenetic (baldness lahy lahy).
Rano Finasteride roitso (98319-26-7) Specifications
Product Name Vola Finasteride vita amin'ny Rano
Anarana simika N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide;17β-(N-tert-Butylcarbamoyl)-4-aza-5α-androst-1-en-3-one; N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide
Drug Class 5-alpha fanindro-fanadiovana, steroid steroid, Benign Prostatic Hypertrophy agents
molekiolan'ny Formula C23H36N2O2
molekiolan'ny Wvalo 372.54
mitsonika Point 253 ° C
Freezing Point Tsy misy angona misy
Ny antsasaky ny biolojia 6-8 ora
Color Mavokely fotsy / fotsy matevina
Solubility DMSO: 32 mg / mL, mavo malalaka amin'ny Chloroform sy ny alikaola, vitsy be loto anaty rano
Vola Finasteride vita amin'ny Rano Application Tadiavo ny volo volo (lahy) fotsiny amin'ny olon-dehibe. Azo atao koa ny mampiasa vovokam-boloky vita amin'ny Finasteride mba hikarakarana ny hyperplasia tsara tarehy, fihenan'ny prostaty lava, manatsara ny fatran'ny urine sy ny fampiroboroboana ny hyperplasia tsara tarehy.
Rano fisaroan-dranom-bolo (98319-26-7) Description
Ny Finasteride dia manakana ny fiovan'ny testosterone amin'ny dihydrotestosterone (DHT) ao amin'ny vatana. Ny Finasteride dia ampiasaina amin'ny fikarakarana ny volo ho an'ny lahy eo amin'ny vertex sy ny faritra afovoany midina. Ny volo malefaky ny lehilahy dia toe-javatra mahazatra izay ahatsapan'ny lehilahy amin'ny fanala ny volo eo amin'ny tadin-doha. Matetika, izany dia miteraka lolom-bolo sy / na mipoitra eo an-tampon-doha. Levitra is for use only by men and should not be used by women or children.
Finasteride vovoka (98319-26-7) Mechanism of Action
Ny Finasteride dia miasa amin'ny fampihenana ny habetsan'ny hormone dihydrotestosterone (DHT) ao amin'ny vatanao. Ny DHT dia matetika mahatonga ny prostate hitombo bebe kokoa.
Ny fihenan'ny DHT dia manampy amin'ny fanalànao ny prostateo tsy hihalehibe kokoa. Mitombo koa ny fitomboan'ny volo ary mihena ny volo amin'ny volo eo amin'ny lohanao. Ny fitomboan'ny volo amin'ny faritra hafa ao amin'ny vatana dia tsy misy fiantraikany.
Fampiharana ny vovony Finasteride (98319-26-7)
Ny vovon-tsakafo Finasteride dia ampiasaina mba hanehoana ny baldness lahy (androgenetic alopecia) eo amin'ny satroboninahitra ary eo afovoan'ny hoditra. Tokony hampiasa azy fotsiny ny olon-dehibe.
Vovonan'ny Finasteride Recommended (98319-26-7) Dosage
• Dose adult mahazatra ho an'ny Hyperplasia prostatic
5 mg oral indray mandeha isan'andro
Fanamarihana: Ny dosina dia mitovy amin'ny fitsaboana simotherapy sy miaraka amin'ny fitsaboana.
• Fampidiran-danja ara-pahasalamana ho an'ny alogène Androgenetic
1 mg oral indray mandeha isan'andro
Ho an'ny fitsaboana ny fatran'ny volo lahy (androgenetic alopecia) amin'ny lehilahy irery ihany. (Fiarovana sy herim-pahalalahana no naseho tamin'ny lehilahy teo anelanelan'ny 18 ka hatramin'ny 41 taona nahitana ny fahasimban'ny volo sy ny volo eo afovoany):
Fanamarihana: Ny fampiasana isan'andro ho an'ny 3 volana na mihoatra dia ilaina alohan'ny hahazoan'ny tombony. Ny fampiasana ny tohiny dia asaina hanohanana tombontsoa. Ny fialana amin'ny fitsaboana dia mitarika ho amin'ny fihenan'ny vokatra ao anatin'ny 12 volana.
Ny voka-dratsin'ny vovony Finasteride (98319-26-7)
Mitadiava fanampiana ara-pahasalamana raha misy ny iray amin'ireo famantarana ireo: fahasarotana atrehina; fanaratsiana ny tavanao, molotra, lela, na tenda. Antsoy avy hatrany ny dokotera raha mahita marary, fanaintainana, fitsaboana, na fiovana hafa. Mety ho famantarana ny homamiadan'ny nono izany.
Ny fihoaram-pefy tsy dia lehibe loatra dia mety ahitana ny:
▪ tsy fahampian-tsakafo, fahalotoana amin'ny firaisana ara-nofo, na olana mitranga amin'ny orgasme;
▪ Ejaculation tsy mety;
▪ tondra-drano eny an-tananao na tongotra;
▪ maneno na manalefaka ny nononao;
▪ fitabatabana, fahalemena;
▪ fahatsapana tahaka ny mety hivoahanao;
▪ fihenam-bava; na
▪ fihenan'ny hoditra.
Ny vokatra ara-pananan'ny vovon-dite Finasteride (fihenan'ny libido, olana amin'ny fananganana fanamorana, olana amin'ny ejaculation) dia mety mitohy aorian 'ny fitsaharanao ity fanafody ity. Miresaha amin'ny dokotera raha manana olana mikasika ireo fiantraikany ireo ianao.